Agrochemicals, Wakiilka Firdhisan, Acron Crotonic - Freemen
19 sano waxay diirada saareysaa cagajuglaynta rinjiga iyo dahaadhka qoryaha.
Shanghai Freemen Chemicals Co, .Ltd waxay higsaneysaa inay noqoto mid ka mid ah shirkadaha keena kiimikada caalamiga ah iyagoo abuuraya qiime dheeraad ah. Waxaa naga go'an inaan siinno alaabooyin kiimiko ganaax dheer oo waara oo tartan rasmi ah siiya macaamiisha dhammaadka suuqyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka iyada oo loo marayo isdhexgalka ilaha.
Waxaan bixinaa faylalka tacliimeed ee kaladuwan si aan ugu adeegno qeybiyeyaasha maxalliga ah annaga oo in ka badan 25 sano aan khibrad u leenahay warshadaha cilmiga beeraha. Dalabkeenu wuxuu u dhexeeyaa kuwa dhexdhexaadka ah illaa kuwa firfircoon ee aan firfircooneyn (cayayaanka, Fungicides iyo Herbicides) iyo qaabeynta. Waxaan ka taxaddarnaa quliaty-da alaabtayada, oo aan ku xaddidnayn auxilaries iyo dareerayaasha, waxaan ku siin karnaa cabbir kala duwan oo lagu buuxiyo si loo daboolo baahida macaamiisha.
Waxaan ku siinnaa dhexdhexaadiyeyaal horumarsan oo la xushay iyo API oo leh aqoonteena farsamada iyo dhaqanka wax soo saarka GMP. Waxaan si adag u raacnaa shuruudaha ku saabsan dareeraha iyo xakamaynta wasakhda, si loo hubiyo isticmaalka amniga ee alaabteenna.
Waxyaabaheena waxqabadka sare ee la xushay waxaa loo isticmaalaa codsiyo badan oo kala duwan: laga bilaabo warshadaha baabuurta iyo taayirada ilaa warshadaha korontada, dhismaha iyo saliida iyo gaaska.Waxaan u adeegi doonaa macaamiisheenna wax soo saarkayada iyo farsamada aqoonta iyo xirmada xogta.
Waxaan diyaar u nahay inaan horumarino oo aan canshuuro soo saarno qaar ka mid ah takhasusyada horumarsan laga bilaabo miisaanka kiimikada illaa wax soo saarka ganacsiga si isdaba joog ah iyo muddo fog. Alaabtayada bixitaanka waxay leeyihiin faa iidooyin farsamo oo u gaar ah iyaga oo ka dhigaya unugyada habka wax loo hagaajinayo ama alaabada ceeriin ee gaarka ah. Waxaan sii wadeynaa hagaajinta qiimaha iyo heerka HSE maalin kasta.